"Love Rosie" (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး | Dream Channel
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ romantic ဆန်ဆန်အချစ်ကားလေးတွေကို နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ Dreamers တို့အတွက် 22 Oct 2014 တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့
"Love Rosie" ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီကားလေးက အိုင်ယာလန်လူမျိုး စာရေးဆရာမ Cecelia Ahern ရဲ့ 2004 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံး No.1 စာရင်းဝင် "Where Rainbows End" ဆိုတဲ့နာမည်ကြီး ဝတ္ထုလေးကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Sam Claflin(Me Before You,2016) နဲ့ မင်းသမီးလေး Lily Collins(Mirror Mirror) တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ ။ ဇာတ်ပို့တွေအနေနဲ့ကတော့ Christian Cooke နဲ့ Suki Waterhouse တို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ Christian Ditter ပါ။
Rosie Dunne အဖြစ် Lily Collins
Alex Steward အဖြစ် Sam Calflin
Greg အဖြစ် Christian Cooke
Bethany Williams အဖြစ် Suki Waterhouse
Rosie နဲ့ Alex က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ ။ အတူသွား အတူစားပြီး အိမ်မက်တွေအတူတူမက်ခဲ့ကြတဲ့ best friend တွေပေါ့။ Alex ကထူးချွန်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီး Rosie ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်ကြီးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ လမ်းစလေးရောက်လာပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဝေးကွာစေတဲ့လမ်းလေးဆိုလည်း မမှားပါဖူး။ အဲ့အကြောင်းလေးက Alex က USA မှာကျောင်းသွားတက်ဖို့ Scholership ရလာတာပါ။ ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ဝေးကွာသွားခဲ့ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိအောင် တိတ်တ်ိတ်လေးပုန်းထားတဲ့ အချစ်တွေက အေးစက်ပျောက်ကွယ်သွားမှာလား? ဒီကြားထဲ Rosie ဘေးမှာ Alex မရှိချိန် ကြုံလာတဲ့ဒုက္ခတွေကို Rosie တစ်ယောက် ဘယ်လိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ Dreamers တို့ကပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါတော့နော်။
☆တစ်ကယ်ကိုကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။Down ကြည့်ကြတဲ့ Dreamers တို့လုံးဝနောင်တမရစေရပါဖူး။ ☆နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မှာချင်တာကတော့
ဒီကားလေးကိုတော့ Translater အဖြစ် Anner ł§ နဲ့ Encoder အဖြစ် Aung Ko Lin တို့က ထပ်မံကြိုးစားပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Dreamers လေးတွေ ကျေနပ်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ Dreamers တို့ကောင်းသောညပါနော်...
Duration - 1h 43mins
Size - 565 MB
Myanmar Subtitle encoded
Translated by Anner ł§
Encoded by Aung Ko Lin
Labels: 2014, Web Drama
Bad Moms (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+ (720p HD)
Bad Moms (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး 18+ IMDb : 6.3 Rotten Tomatoes : 60% (18+ ဆိုလို့ ညစ်ညမ်းအခန်းတွေ အများကြီးနဲ့ကားလို့ မထင်လိုက်နဲ...
Tree Of Heaven (2006) K-Drama (မြန်မာစာတန်းထိုး) 360p
Tree Of Heaven (2006) K-Drama (မြန်မာစာတန်းထိုး) 360p ******************************************...
ဒီကားလေးကိုဘာသာပြန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ High kick3ကိုပြန်ပေးနေတာကိုကြည့်လိုက်ရလို့ပါ တော်တော်လေးရယ်ရပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ရှာကြည့်တော့ ...
Modern Farmer (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီကားဟာ ဘာသာပြန်တဲ့သူကိုရဲရင့်ကျောကိုယ်တိုင်ပြန်နေရင်းနဲ့တောင်အူတက်နေရတဲ့ကားပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီလိုပါ exoဆိုတဲ့တီးဝိုင်းအဖွဲ့မကလူငယ်...
Please, Come Back, Mister (2016) - မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ
Please Come Back, Mister (2016) Title: 돌아와요 아저씨 / Please Come Back, Mister Chinese Title: 回來吧大叔 Also known as: Come Back Ahjussi / Com...
Heartstring - မြန်မာစာတန်းထိုး
Heartstring - Viki 9.1/10 Drama Fever 4.7/5 Imdb 7.5/10 ဇာတ်လမ်းတွေမတင်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့DCရဲ့ပရိသတ် ကြီးအတွက်koreaseri...
Beyond Season 1 မြန်မာစာတန်းထိုး
Imdb 7.4 Beyond ဇာတ်​ကားဟာ အ​မေရိကန်​ နာမည်ေ​ကျာ်​ ​တီ​ဗီ စီးရီးတစ်​ခုဖြစ်​ပီး ၁၂ နှစ်​​ကျော်​ကြာ ကိုမာဝင်​​နေရာက နိုးလားပြီး ထူးဆန်...
The Magician - 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
The Joseon Magician (2015) - မြန်မာစာတန်းထိုး ************************************ မင်္ဂလာရှိသော တန်ဆောင်တိုင်အခါသမယ ဖြစ်ပါစေ၊ အစစ အရာရာ...
The Flatterer (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Asianwiki 8.2 ဒါရိုက်တာKwon Suk Yongရိုက်ကူးထားပြီး မင်းသားတွေကတော့ moonlightထဲကကိ်ုယ်ရံတော် Kwak Dong Yeon နဲ့ FT islandအဖွဲ့ဝင်...
Choko Bank ဆိုတဲ့ဇာတ်​ကား​လေးဟာ ​ကောလိပ်​မှာ ဘွဲ့ရထားပီး အလုပ်​သမားအဖွဲ့ ထဲဝင်​ဖို့ ကြိုးစား​နေတဲ့ Kim Eun Haeng ဆိုတဲ့ ​တစ်​​ယောက်​ အ...
Owned By : Thant Hlaing Oo | Dream Channel |
Copyright © 2016. Dream Channel - All Rights Reserved
Edited By Thant Hlaing Oo Published by Dream Channel
Thanks all our fans Haveagreat day!